Akwụkwọ Max Kremer na Martech Zone |
Edemede site na Max Kremer
Daysbọchị ndị a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ nyocha niile dị n'ebe ahụ ka ị soro soro ihe omume pịa. Clicks na-anọchite anya ọtụtụ mmekọrịta onye ọrụ nwere na saịtị gị. Mana ozugbo inwere data ahu, ugbua gini? Nwere ike ịlele ọ bụla pịa ndị ọbịa na-eme, mana nke ahụ bụ idei mmiri nke data ị gafere. Pịa nsuso, mgbe etinyere ya nke ọma, nwere ike ịbụ otu ngwaọrụ kachasị ike iji ghọta etu ndị mmadụ siri meghachi omume na ọdịnaya gị yana otu esi eme